ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई बृद्धि गर्दै लगिन्छ: मन्त्री गुरुङ (अन्तर्वार्ता) - १० असार २०७७, NepalTimes
ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई बृद्धि गर्दै लगिन्छ: मन्त्री गुरुङ (अन्तर्वार्ता)
कुनै पनि महामारी वा विषम स्थितिमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेमा आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग नै हुने गर्छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तको मुहारमा उज्यालो नदेखिएसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुन सक्दैन । यस यथार्थलाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्नुभएका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ समाजको पीँधमा रहेका वर्गको हित र विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक विमर्शसहित नीतिगत रुपान्तरण गर्ने काममा अनवरत लाग्नुभएको छ । गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुलुकभरिबाटै सबभन्दा बढी मतान्तरसहित दोलखाबाट निर्वाचित गुरुङका लागि पहिलो पटक आफ्नो कार्यादेश भएको क्षेत्रमा परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने अवसर र चुनौती दुवै उपलब्ध छन् । मन्त्री गुरुङसँग सिंहदरबारस्थित उनको कार्यकक्षमा सोमबार राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रकाश सिलवाल र कालिका खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरणः
–कामका दृष्टिले मूलतः यो मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय नै हो भन्ने बुझिनुपर्छ । मैले मन्त्रीहरू र सांसद्हरूका बीचमा यसरी नै प्रस्तुत गर्ने गरेको छु । यसको नाम परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने खालको बहस पनि उहाँहरूको बीचमा चलाएको छु । त्यसका लागि हामीले प्रस्ताव नै तयार गरेर जाने कि भन्ने पनि छ ।
–हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ । यस क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ र अन्य संस्थाहरुसँग पनि हामी मिलेर काम गरिरहेका छौँ । जहाँ रहे पनि कोही भोकै नरहुून् भन्नेमा हामी सचेत छौँ । त्यस्ता सूचना पाइएमा दोहोरो राहत नपर्ने गरी तत्काल राहत उपलब्ध गराएका छौँ । यो मानवीय सेवा हो, हामीले यस्तो कामको प्रचार भने गर्ने गरेका छैनौँ ।
–यो राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेर नै नीति तथा कार्यक्रममै ल्याएका छौंँ । हामी यससम्बन्धी अध्ययन गर्छौँ । विदेशमा रहेका यस्ता अभ्यास पनि हामी हेर्छौँ । कानून बनाएर स्थानीय तहमा सहजीकरण गरी यसको नमूना पनि दिन्छौँ । त्यहाँको स्रोत र साधन हेरेर हामी त्यो काम गर्नेछौंँ । रोजगारीको अवसरको सिर्जना पनि गर्नेछौँ ।
–महिनावारीजस्तो प्राकृतिक अवस्थाको सम्मान गरौंँ । संघसंस्थालाई दिँदा पैसा होउन्जेल मात्र अभियान चल्छ, नभए बन्द हुन्छ भनेर निरन्तरताका लागि सरकार आफैंँ अघि सरेको हो । यस्तो चेतनामूलक अभियानलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गरेर महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ ।
–कैलालीमा क्वारेन्टिनमा बलात्कारजस्तोे अमानवीय घटना भयो । अरू ठाउँमा पनि घटना हुनेबित्तिकै हामी उद्धारका लागि पहल गर्छौँ । प्रहरीमा खबर गर्छौं र उद्धार पनि गर्छौँ । नेपाली परम्परामा घटना भएपछि उद्धार गर्नेलाई समाजसेवा भन्छन् तर घटना हुनै नदिन के गर्ने भनेर हामीले पुरुषलाई समेत सहभागी गराउने अभियान शुरु गरेका हौंँ । यस्ता अमानवीय घटनाको मुहान कहाँ छ ? घटनाको स्रोत पत्ता लगाउनुपर्यो । अन्धविश्वास र अज्ञानका कारण समाजमा कतिपय हानिकारक अभ्यास पनि हुन सक्छन् । यो अध्ययन गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि हामीले महिला सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । किन अहिले पनि बलात्कार र आत्महत्याका घटना आइरहेका छन् ? रोजगारीका लागि विदेश जाने र आउने गर्दा उत्पन्न समस्या पनि अन्त्य गर्न जरुरी छ । समाजमा दिदीबहिनीको इज्जत लुटियो भन्ने समाचार सुन्नुभन्दा गाउँगाउँमा महिला उद्यमशीलता शुरु गरेर नेपालमै रोजगारीको सिर्जना गर्न जरुरी छ । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ । महिलालाई आर्थिक सशक्तीकरण गरेपछि यस्ता घटना आफैँ कम हुँदै जान्छन् ।
–कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउनु जरुरी छ भनेर हामीले योजना बनाइरहेका छौं । क्वारेन्टिनमा रहँदा के गर्ने ? घर गएपछि के गर्ने ? दीर्घकालीन रूपमा के गर्ने भनेर रणनीति बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ ।
–दुर्गम जिल्लामा अस्पताल नभएको, उचित सडकको व्यवस्था नभएको अवस्थामा हामीले विपन्न परिवारका लागि आपत्कालीन उद्धार गर्ने गरेका छौ । महामारीमा १७ र जम्मा १०७ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार भएको छ । दुर्गमबाट हेलिकप्टर आउने भएपछि अवस्था कमजोर नै देखिन्छ । त्यस्ता महिलालाई पोषणयुक्त खानाका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि हेरिरहेका छौ ।
कोरोना संक्रमणका कारण नवौं राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित